Home Wararka Faahfaahin dheraad ah ayaa ka so baxaysa bom gacmeed caawa lagu weraaray...
Faahfaahin dheraad ah ayaa ka so baxaysa bom gacmeed caawa lagu weraaray xarunta DH ee Boosaaso
Faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa weerar gaadmo ah oo lagu qaaday ciidamo katirsan kuwa ammaanka gobolka Bari oo ka dhacay gudaha magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari.
Weerarkaan oo loo adeegsadey bam gacmeed ayaa la sheegay in lagu beegsaday ciidamo goob baaritaan ay u ooleed agagaarka dowladda hoose ee degmada Boosaaso sida goob joogayaal warbfidiyeenka u sheegeen.
Weerarkaasi ayaa laamaha caafimaadku xaqiijiyeen inuu ku dhintay hal askari halka mid kale iyo labo ruux oo shacab ahna ay ka soo gaareen dhaawacyo kala duwan.
Previous articleMW Gaas oo dhagax dhigay wado cusub iyo guriyo lagu caawiye dadka reer Dhahar
Next articleAL Shabaab oo magalada Xaradheere gudaheeda ka baxay qaab cusubna la yimid
Dhalinyaro Damacsaneed in ay Al-shabaab ku biiraan oo la qabtay!
Hadalada ka soo yeeray dowlada Kenya waxa uu muujinaya jiritaanka heshiis...